Shower Head တပ်ဆင်နည်း - သတင်း - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
ရေချိုးခေါင်းကို နေ့စဉ် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ။
1. ရေချိုးခန်း နော်ဇယ်ကို အသုံးပြုနေချိန်တွင် အပူချိန် 70 ဒီဂရီ အောက်တွင် ရှိနေကြောင်း သေချာစေရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက မြင့်မားသောအပူချိန်သည် ရေချိုးခန်း Nozzle ၏ သက်တမ်းကို တိုစေသည်၊ ၎င်းသည် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ နော်ဇယ်တပ်ဆင်ခြင်း၏ အနေအထားသည်လည်း လျှပ်စစ်အပူအရင်းအမြစ်၏ နိယာမပေါ်တွင် အခြေခံထားသင့်ပြီး ၎င်းကို Yuba အောက်တွင် တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ရန် မဖြစ်နိုင်သေးပါ။ နှစ်ခုကြားအကွာအဝေးကို 60 စင်တီမီတာခန့်ရှိသင့်သည်။
2. ရေချိုးခေါင်းကို သတ္တုပိုက်အဖြစ် အသုံးပြုသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ယင်းတို့သည် အချိန်တိုင်း သဘာဝအတိုင်း ဆန့်တန်းနေသည့် အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းထားသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုသည့်အခါ faucet တွင် ဆံထုံးပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ ပိုက်နှင့် faucet အကြား အဆစ်များ ရှိနေကြောင်း ဤနေရာတွင် သတိပြုသင့်သည်။ ၎င်းသည် အချို့သော အသေအပျောက်များကို ထုတ်လုပ်ရန်မဟုတ်ပါ၊ သို့မဟုတ် ၎င်းသည် ရေပိုက်ကို ပြတ်တောက်သွားစေနိုင်ပြီး အချို့သော ပျက်စီးမှုများသည် ယခုအချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
3. ရေချိုးခေါင်းကို တစ်နှစ်ခွဲကျော် အသုံးပြုပြီးသောအခါ၊ ဤအခြေအနေတွင်၊ ရေချိုးခေါင်းကို ဖြုတ်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် ၎င်းကို ဇလုံထဲတွင် ထည့်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် စားသုံးနိုင်သော အဖြူရောင်ရှာလကာရည်အချို့ကို မျက်နှာပြင်အတွင်းပိုင်းနှင့် စိမ်ထားမည်ဆိုပါက ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် ရေချိုးခေါင်း၏ ရေထွက်ပေါက်ကို သန့်စင်ရန် ချည်ထည်အချို့ကို အသုံးပြုသင့်ပြီး ရေဆေးချပါ။ ဒီအဖြူရောင်ရှာလကာရည်။
အနှစ်ချုပ်- ဤသည်မှာ ရေချိုးခေါင်းကို တပ်ဆင်ပုံအကြောင်း နိဒါန်းဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်ခြင်းအား အထက်ပါနည်းလမ်းများအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် တပ်ဆင်မှုအသေးစိတ်အချို့ကိုလည်း အထူးဂရုပြုပါသည်။
လွန်ခဲ့သော:Shower Head ကို ဘယ်လို သန့်ရှင်းရေး လုပ်မလဲ။ Shower Nozzles အတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အကြံပြုချက်များ